Qatar Airways iri kudzosa maA380s emwaka wechando
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Qatar Airways iri kudzosa maA380s emwaka wechando
Qatar Airways iri kudzosa A380 yayo yemwaka wechando.
Nguva ichangoburwa yezvikepe gumi nepfumbamwe zveAirbus A19 nemutongi nekuda kwenyaya irikuitika ine chekuita nekushatisa kwepasi pasi pepende kwakonzera kusada kudzosa A350 kushanda.
Kuenderera mberi kwekuwedzera kwekudiwa kwevatyairi uye huwandu hwendege kuyambuka network yepasi rose inotarisirwa munguva yechando 2021.
Qatar Airways inozengurira kuita danho rekugamuchira zvikepe zveA380 kudzoka mukushanda nekuda kwekushomeka kwehuwandu.
A Qatar MhepoAirbus A380 yakakwira mudenga kekutanga mumwedzi inopfuura gumi nemisere svondo rino, ichimisa ndege kubva kuDoha International Airport (DIA) kuenda kuHamad International Airport (HIA) mushure mekunge ndege iyi yatora danho rekugamuchira ngarava idzi. kushanda nekuda kwekushomeka kwesimba kuri kuramba kuchiitika.
Zvinofungidzirwa kuti angangoita mashanu endege ari gumi Airbus Ndege yeA380 ichadzoserwa kushanda kwenguva pfupi mumavhiki anouya kuti itsigire huwandu hwezvikepe munzira dzakakosha dzechando, kusanganisira London Heathrow (LHR) neParis (CDG), kubva 15 Zvita 2021.
Mutakuri wenyika weNyika yeQatar parizvino ari kutarisana nezvipingamupinyi zvakakura kune huwandu hwayo hwezvikepe nekuda kwekumisikidzwa kwekupedzisira kwe19 yezvikepe zvayo. Airbus Zvikepe zveA350 nekuda kwekukurumidzira kushatisa kwepasi kuri kukanganisa pamusoro pendege pazasi pepende, sekurairwa neQatar Civil Aviation Authority (QCAA).
Iyo kambani yendege zvakare munguva pfupi yapfuura yakaunza zvakare akati wandei ayo Airbus Zvikepe zveA330 zvichitevera kuenderera mberi kwekuwedzera kwezvinodikanwa nekuda kwekurerutsirwa kwezvirambidzo zvekufamba uye nguva iri kuuya yezororo rechando, izvo zvinotarisirwa kuona kudzoka kune pre-COVID mazinga.
Qatar Airways Group Chief Executive, VaChangamire Mr. Akbar Al Baker, akati: "Kudzika kwezvikepe gumi nepfumbamwe zveQatar Airways A19 kwatisiya tisina imwe nzira kunze kwekungounza dzimwe ngarava dzedu dzeA350 kumashure munzira dzakakosha dzechando.
"Izvi zvigadziro zvinokonzerwa nenyaya irikuenderera mberi ine chekuita nekukurumidzira kushatisa kwefuselage pazasi pepende, iyo ichiri nyaya isina kugadziriswa pakati. Qatar Airways uye mugadziri uyo chikonzero chake chichiri kunzwisiswa.